वार्षिक साधारण सभा कात्तिक २८ गते, बुक क्लोज कहिले….? – Palika Express
वार्षिक साधारण सभा कात्तिक २८ गते, बुक क्लोज कहिले….?
PalikaExpress १२ कार्तिक २०७७, बुधबार 301 पटक हेरिएको
सानिमा बैंकले प्रस्तावित लाभांश सहित विविध प्रस्ताव पारित गर्न कात्तिक २८ गते १६ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । आम्रपालि ब्यांकेट, बालुवाटार, काठमाडौंमा विहान ११ बजे सभा शुरु हुनेछ ।
यस साधारण सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ का लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको १३ दशमलव ६० प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । यसैगरि गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित र चालू आर्थिक वर्षका लागि लेखापरिक्षक नियुक्तिकाे प्रस्ताव समेत पारित गरिने छ ।
यसका साथै अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गर्नुपरेमा सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णयसमेत सभाले गर्नेछ ।
कम्पनीले यस वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ६० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ८० करोड १३ लाख ८० हजार रहेको छ । बोनस पश्चात यो पूँजी रू. ९ अर्ब ६८ करोड १५ लाख १८ हजार पुग्नेछ ।
साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले कात्तिक १७ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यस आधारमा कात्तिक १६ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरु मात्र कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्न र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन् ।साभार-IP INVESTOPAPER